ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ - Myanmar Builders Guide
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အစုန် အဆန် အကြိမ်ကြိမ် အမြန်လမ်းမကြီးကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင် သွား လာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီး မှာလည်း တာဝန်ရှိသူတွေ အစဉ်အမြဲ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်း အဆင့်မြှင့်တင်နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ လမ်းမှာ မတော်တဆ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်တွေကိုလည်း တစ်ရံတစ်ခါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Workshop တစ်ခုမှာ “Road Safety Audit (RSA) for Central Backbone Expressway of Myanmar” ခေါင်းစဉ်နဲ့ Road Safety Audit (RSA) Team က လေ့လာ ရှာဖွေ တင်ပြ ဆွေးနွေးတဲ့ အချက်တွေဟာ အလွန်အသုံးဝင်ပြီး အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူတိုင်း သိရှိ သတိထားဖို့ ကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း ယခုတွေ့ရှိချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ဖို့၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ဖို့၊ ဒေသတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အမြန်လမ်းမကြီး ဖြစ်ဖို့ အချိန် နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်း သွားမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ဆဲ အခြေအနေမှာ ကျွန်တော့လိုပဲ အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူတွေ သိရှိ လေ့လာ သတိထားနိုင်ဖို့ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်း စီမံကိန်းအမည်။ Road Safety Audit(RSA)For Central Backbone Expressway of Myanmar
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများ။7RSA Specialist (5 from Korean and2from ADB & Australia)
လေ့လာ ခဲ့သည့် ကာလ။ Dec. 2018 ~ Dec. 2019 (12 months)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အရေအတွက် ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ တစ်ရက်လျှင် ၂,၁၅၃ စင်း ရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ တစ်ရက်ကို ၄,၅၉၆ စင်းခန့် ဖြစ်ပါတယ်။ (၄) နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၀၀) ကျော် တိုးတက် သုံးစွဲလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမြန်လမ်းရဲ့ လမ်း အစိတ်အပိုင်းအလိုက် အသုံးပြုမှု အနေနဲ့ကတော့ ရန်ကုန်-ပဲခူး လမ်းပိုင်း နှင့် ဖြူး-နေပြည်တော် လမ်းပိုင်းမှာ မော်တော်ယာဉ် အသုံးပြုမှု ပိုမိုမျာပြားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောင် (၁၀) နှစ်ကျော် ကာလအတွင်းမှာလည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်က အသုံးပြုထက် ယာဉ် အရေအတွက်ထက် (၂)ဆကျော် ပိုမိုလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆဖြစ်မှုမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၁၁,၆၇၅ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ အကြိမ်ပေါင်း ၁၇,၃၈၄ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ၁၀.၅% လောက် တိုးပြီး ဖြစ်တည်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မတော်တဆ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ယာဉ်မောင်းသူရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းက စုစုပေါင်း အရေအတွက်ရဲ့ ၇၂.၅% အထိ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ လူပေါင်း လေးထောင်ကျော်လောက် သေကျေ ပျက်စီးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှုတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ် -- ယာဉ်မောင်းရဲ့ ဂရုတစိုက်မောင်းနှင်မှု မရှိခြင်း (Driver Carelessness) 73% - မော်တော်ယာဉ် ချို့ယွင်းမှု (Vehicle defect) 3% - လမ်း ချို့ယွင်းမှု (Road defect) 1% - ယာဉ်မောင်းသူ လမ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်း (Regulation violation – driver) 4%
- လမ်းဖြတ်ကူးသူ လမ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်း (Regulation violation – pedestrian) 6% - အခြား အကြောင်းတရားများ 13%
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး အနေနဲ့ကတော့ ရန်ကုန် (ဘောနက်ကြီး) မှ မန္တလေး လမ်းကြောင်းမှာ (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၂,၆၃၈ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့၊ နှစ်စဉ် သေဆုံးသူ ၁၃၃ ဦး နှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ ၉၅၂ ဦး ခန့် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများဆုံး ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းတရား တွေကတော့ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် တာယာ ကွဲထွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အနည်းဆုံး အခြေအနေကို တွေ့ရပြီးတော့ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၄၇၃ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့၊ သေဆုံးသူ ၁၀၁ ဦး ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ (၅) နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်မှုတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ် -
- သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန် မောင်းနှင်ခြင်း (Over speed) 45.5% - မော်တော်ဆိုင်ကယ် (Cycle) 15.2% - ယာဉ်မောင်းသူ အိပ်ငိုက်ခြင်း (Driver sleepy) 9.3% - ရုတ်တရက် ကွေ့ခြင်း (Sharp turn) 1.0% - သတ်မှတ်ချက် ချိုးဖောက်ခြင်း (Broken rules) 0.3% - စက်ဘီး (Bicycle) 0.1% - ယာဉ်စီးနှင်းသူ၏ အမူအကျင့် (Passenger Behavior) 3.9% - တာယာ ကွဲထွက်ခြင်း (Tire burst) 21.4% - စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု (Machinery Failure) 3.9% - ဝါယာ လျှော့ဖြစ်ခြင်း (Wire shock & burning) 0.6% - လမ်းချော်ခြင်း (Slipping) 1.9%
တွေ့ဆုံ မေးမြန်း သုံးသပ်ချက်
RSA Team အနေနဲ့ အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူတွေကိုကော အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတွေကော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ အမြန်လမ်းမှာ မတော်တဆ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်တွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းများနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုမှာတော့ မတော်တဆဖြစ်မှုတွေ လျော့ချနိုင်ဖို့ အောက်ပါ အချက်တွေ အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် - - အမြန်လမ်းရဲ့ လမ်းမျက်နှာပြင်ကို ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း (Improvement of Pavement Condition)
- တာယာ၊ ရှေ့မီးကြီး စတဲ့ မော်တော်ယာဉ် ကြံ့ခိုင်ရေးကို စစ်ဆေးခြင်း (Inspection of Vehicle – Tire, Head Light, etc.) - မူးယစ် သောက်စားထားသည့် ယာဉ်မောင်း နှင့် သတ်မှတ် မိုင်နှုန်း ကျော်လွန် မောင်းနှင်မှုများကို ဥပဒေအရ ကြပ်မှတ်ခြင်း (Enforcement of Drunk Driving, Over speed) - လမ်း သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အမှတ်အသားများနှင့် မီးအလင်းရောင် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Facilitation of Sign & Marking and Illumination) - မိုးရွာစဉ် အရှိန်လျော့ မောင်းနှင်ရန်အတွက် အသိပေး စည်းရုံး ဆောင်ရွက်စေခြင်း (Inducement of Speed Reduction in Rainy Condition)
မော်တော်ဆိုင်ကယ် အသုံးပြုသူတွေနှင့် လမ်းဖြတ်ကူးသူများနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုမှာတော့ မတော်တဆဖြစ်မှုတွေ လျော့ချနိုင်ဖို့ အောက်ပါ အချက်တွေ အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် - - မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက် သီးသန့်လမ်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Exclusive road or Lane for Motorcycles) - ယာဉ် ရပ်နားစခန်းများ မိုင် (၅၀) လျှင် တစ်ခု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Service Area – every 50 miles) - သတ်မှတ် မိုင်နှုန်း ကျော်လွန် မောင်းနှင်မှုများကို ဥပဒေအရ ကြပ်မှတ်ခြင်း နှင့် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲ တပ်ဖွဲ့ အင်အား တိုးမြှင့်ခြင်း (Enforcement of Over speed and Increase of Police Officers)
- တံတား ဆိုင်းဘုတ် အစရှိသည့် သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ နှင့် အမှတ်အသားများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Facilitation of Sign & Marking – Bridge Sign, etc.) - မိုးရွာစဉ် အရှိန်လျော့ မောင်းနှင်ရန်အတွက် အသိပေး စည်းရုံး ဆောင်ရွက်စေခြင်း (Inducement of Speed Reduction in Rainy Condition) - အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုမှာတော့ မတော်တဆဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းများ အနေနဲ့ အောက်ပါ အဓိက အကြောင်းများကို တွေ့ရှိရပါတယ် - - လူ။ ယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြုံ နည်းပါးခြင်း၊ ခရီးရှည် မောင်းနှင်ရခြင်း (Lack of Driving Experience, Long-distance Driving) - ယာဉ်။ အခြေအနေဆိုးရွားသည့် ပန်းတင်ထားသည့် တာယာ စသည့် မော်တော်ယာဉ် ၏ ချွတ်ယွင်းချက် (Vehicles defects – Deteriorated Recapped Tire, etc.)
- လမ်း။ လမ်း မျက်နှာပြင် ပျက်စီးမှုများ (Pavement Defects) - အမြန်လမ်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအချက်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် - - ယာဉ်မောင်းသူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ (Improvement of the Driver’s Behavior) - လမ်းအသုံးပြုသူတွေအတွက် လမ်း အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အသိပညာတွေ ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ (Campaign to Improve the Awareness of Road Safety for User) - အမြန်လမ်းအတွက် သီးသန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ ရဲ အရာရှိ အရေအတွက် တိုးမြှင့်ဖို့ (Increase of Specialized Police Officers)
RSA Team ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အမြန်လမ်းမကြီးမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများဟာ လမ်းရဲ့ အရည်အသွေး မကောင်းမွန်မှု စတဲ့ အချက်တွေထက်စာရင် လမ်းအသုံးပြုသူများရဲ့ အမူအကျင့်တွေကြောင့် ပိုပြီး ဖြစ်ပေါ်တာကို လေ့တာတွေ့ရှိရပါတယ်။ လမ်းဖြတ်ကူးသူတွေ၊ ဒေသခံ ကျွဲ နွား စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် နှင့် မတန်တဆ တင်ဆောင်ကြတဲ့ စက်မှုဇုန် Light Truck လိုမျိုး တရားမဝင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ယာဉ် တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ မတော်တဆမှုတွေကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို တင်ပြထားပါတယ် -
- လမ်းဖြတ်ကူးသူများ (Pedestrian Crossing)
- ဒေသခံ ကျွဲ နွား တိရိစ္ဆာန်များ လမ်းဖြတ်ကူးမှု (Domestic Animal Crossing)
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ (Motorcycle)
- တရားမဝင် ပြင်ဆင်ထားသော ယာဉ်များ (Illegally modified Vehicle)
- သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာ မဟုတ်သည့် “ဂ ငယ်ကွေ့”များ (Illegal U-Turn)
- အမြန်လမ်းမသို့ အဝင်/အထွက် လမ်းကြောင်းများ (Exit & Entrance Lanes)
- အလင်းရောင် နည်းပါးခြင်း (Lack of Illumination)
- ဆန့်ကျင်ဖက် ယာဉ်ကြောရှိ ယာဉ်မှ မီးကြီး (Glare by Vehicles on Opposite Lane)
- လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားမှု နည်းပါးခြင်း (Lack of Safety Treatment on Work Zone)
- မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းချိန်တွင် အမြင် ဝေဝါးခြင်း (Poor Sight by Heavy Rain during Rainy Season)
RSA Team အနေနဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးနှင့် ပတ်သက်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ချို့ယွင်းမှုများကို ဆက်လက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ခေါင်းစဉ်များ ခွဲခြား တင်ပြ ထားပါတယ်-
(၁) Cross-Section: Operational Characteristics
အမြန်လမ်းမကြီး၏ လမ်း တည်ဆောက်မှု အနေအထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင်မှု သွင်ပြင် လက္ခဏာအရ တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းအကျယ်၊ ပင်မလမ်းဘေး လမ်းခင်းထားတဲ့ မျက်နှာပြင် စတာတွေက တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ တူညီမှု မရှိခြင်း
(ခ) အမြန်လမ်းမဘေးတွင် လမ်းပခုံးမရှိခြင်း၊ လမ်း ပခုံး နေရာ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း (အရေးပေါ် ယာဉ်ရပ်နားနိုင်ရန်အတွက် နေရာ ဆောင်ရွက်ပေးထားရန် လိုအပ် သကဲ့သို့၊ လမ်းပခုံများလည်း ကျယ်ဝန်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
(ဂ) နှေးသည့် မော်တော်ယာဉ်များ၊ အမြင်တာ တိုတောင်းခြင်းများကြောင့် ယာဉ်၏ အမြန်နှုန်းကို တသမတ်တည်း မမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း
(ဃ) ယာဉ်မောင်းသူများအတွက် နားနေရမည့် စခန်းများ နည်းပါးခြင်း
(၂) Cross-Section: Access Management and U-turn
အမြန်လမ်းမကြီး၏ လမ်း တည်ဆောက်မှု အနေအထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဝင်/ အထွက် လမ်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် “ဂ ငယ်ကွေ့” များအရ တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) တားမြစ်ထားသည့် ယာဉ်များ ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရခြင်း
(ခ) မူလ လမ်းမမှ အခြားလမ်းများသို့ ဖြတ်ထွက်၊ ဖြတ်ဝင် လမ်းများ
(ဂ) “ဂ ငယ်ကွေ့” များအား အဝေးမှ မြင်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်း (အချက်ပေး အမှတ်အသားများ တင်ကြို ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
(ဃ) “ဂ ငယ်ကွေ့” ကွေ့မည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့် အတည့်သွားမည့် မော်တော်ယာဉ် အကြား နားလည်မှု လွဲမှားခြင်း (ကွေ့မည့် မော်တော်ယာဉ်အတွက် သီးခြား အရှိန်လျော့ မောင်းနှင်နိုင်မည့် လမ်းကြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်)
(၃) Cross-Section: Median
အမြန်လမ်းမကြီး၏ လမ်း တည်ဆောက်မှု အနေအထားနှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းလယ် ကျွန်းများ တည်ရှိမှုအရ တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းလယ်ကျွန်း နှင့် လမ်း ပေါ်မျဉ်း ဆွဲသား ဆောင်ရွက်ထားမှုများအား နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက် - Asian Highway အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခြင်း
(ခ) လမ်းကာ ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေ ဆိုးဝါးခြင်း နှင့် မတော်တဆ လမ်းဘေး ရောက်ရှိပါက အရှိန်ရပ်နားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု မလုံလောက်ခြင်း
(ဂ) လမ်းလယ်ကျွန်း အနားသတ်များ ပျက်စီးနေခြင်း နှင့် မြင်ကွင်း ရှင်းလင်းမှု မရှိခြင်း
(၄) Alignment: Horizontal & Vertical Alignment of Main Roadway
အမြန်လမ်းမကြီး၏ အနိမ့်၊ အမြင့်၊ အကွေ့၊ အကောက်၊ ညီညာ မတ်စောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းကွေ့များ၏ အချင်းဝက်မှာ မီတာ ၄၀၀ ထက် နည်းခြင်း (အကွေ့ ပြေပြစ်မှု နည်းပါးခြင်း)
(ခ) လမ်းမျက်နှာပြင် အနေအထားမှာ ရေ ထွက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
(ဂ) အနိမ့် အမြင့် အတက် အဆင်း များပြားလွန်းခြင်း
(ဃ) လမ်းသွယ် နှင့် “ဂ ငယ်ကွေ့” အဝင်/ အထွက် နေရာများတွင် မော်တော်ယာဉ်များ ဝိရောဓိ ဖြစ်ခြင်း
(င) ရပ်နားရန်နေရာများ ဝေးကွာခြင်းနှင့် မောင်းနှင်ရသည့်လမ်းကြောင်း ရှည်လျား သဖြင့် ယာဉ်မောင်းများ အိပ်ငိုက်ခြင်း နှင့် သတ်မှတ် မိုင်နှုန်းထက် ပိုမို မောင်းနှင်ခြင်း
(၅) Alignment: Composite Alignment and Sight Distance
အမြန်လမ်းမကြီး၏ အနိမ့်၊ အမြင့်၊ အကွေ့၊ အကောက်၊ ညီညာ မတ်စောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြင်တာ အကွာအဝေးဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) ဘယ်ကွေ့ အတက်များတွင် အဝေးမှ မြင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း
(ခ) လမ်း၏ ကုန်းဆင်းနေရာများ ကြိုမြင်နိုင်မှု နည်းခြင်း
(ဂ) အမြန်နှုန်း လျော့ချရသည့်နေရာများတွင် လက်ရှိအမြန်နှုန်းထက် များစွာ လျော့ချရသည့် နေရာများရှိခြင်း
(ဃ) ကုန်းထိပ် ရှိ ဘယ်ကွေ့ နေရာတွင် “ဂ ငယ်ကွေ့” လမ်းကြောင်း ထားရှိခြင်း
(င) ဘယ်ကွေ့ ကုန်းထိပ်ဆင်း နေရာများတွင် လမ်းလယ်ကျွန်းမှ အမြင်ကို ကွယ်နေခြင်း
(၆) Intersection, Pavement & Drainage: Acceleration/ Deceleration Lane & Waving Section
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ လမ်းဖြတ်များ၊ လမ်းခင်းထားသည့် ပုံစံ နှင့် ရေထုတ် စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြန်နှုန်း တင်ခြင်း/ လျော့ချခြင်း ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းခွဲများ၊ လမ်းဖြတ်များ အတွက် အမြန်နှုန်း လျော့ချ/ မြှင့်တင်ရန် လမ်းကြောများ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
(ခ) လမ်းခွဲများ အဝင်၊ အထွက် သေချာစွာ မသိမမြင်ရခြင်း
(ဂ) လမ်းခွဲများ မရောက်မီ ကွေ့မည့် ယာဉ်အတွက် သီးခြား လမ်းကြောများ မထားရှိခြင်
(ဃ) အမြန်လမ်းမကြီးသို့ မဝင်မီ (သို့မဟုတ်) ထွက်ရာ နေရာရှိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ထားမှု နည်းပါးခြင်း
(၇) Intersection, Pavement & Drainage: Pavement
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ လမ်းဖြတ်များ၊ လမ်းခင်းထားသည့် ပုံစံ နှင့် ရေထုတ် စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လမ်းခင်းထားသည့် အပေါ် တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းမျက်နှာပြင်ခင်းထားသည်မှာ တသမတ်ထည်း မဟုတ်ခြင်း နှင့် လမ်း ပုခုံး နေရာများ ခင်းမထားခြင်း
(ခ) တံတားနေရာ နှင့် အတက်လမ်းများတွင် ကွန်ကရစ် မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်းများ ကွဲအက်ခြင်း နှင့် ကတ္တရာ ခင်းသည့် နေရာများ ပျက်စီး နေခြင်း
(၈) Intersection, Pavement & Drainage: Drainage
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ လမ်းဖြတ်များ၊ လမ်းခင်းထားသည့် ပုံစံ နှင့် ရေထုတ် စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေထုတ် စနစ် အပေါ် တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) လမ်းမကြီး မျက်နှာပြင် အနေအထားအရ လမ်းမပေါ်တွင် ရေအိုင်ခြင်း
(ခ) တံတား အတက်/အဆင်း နေရာများတွင် လမ်း တည်ဆောက်မှု ပုံစံအရ လမ်းမပေါ်တွင် ရေတင်ကျန်ခြင်း
(ဂ) လမ်းပုခုံးတွင် ရေထွက်ပေါက် ထိန်းသိမ်းမှု နည်းသဖြင့် လမ်းမပေါ်တွင် ရေအိုင်ခြင်း
(၉) Auxiliary Facility: Road Safety Facility
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ပြင်ပ ပံ့ပိုးမှု အခြင်းအရာများ အနေဖြင့် လမ်း အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအင်္ဂါများအပေါ် တွေ့ရှိချက်များမှာ -
(က) အမြန်လမ်း အင်္ဂါရပ်နှင့် လျော်ညီစွာ တည်ရှိရမည့် လမ်း ဘေး အကာအရံများ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
(ခ) လမ်း သတိပေး အညွှန်း အမှတ်အသားများ တသမတ်ထည်း မရှိခြင်း
(ဂ) လမ်း အသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့် ဂိတ် နှင့် လမ်းဆုံ နေရာများတွင် ပွတ်တိုက် ထိခိုက်ရန် အကာအကွယ်များ တပ်ဆင်ထားမှု မရှိခြင်း
(ဃ) အမြန်နှုန်းပြ တွက်ချက် အချက်ပေးသည့် ကိရိယာများ မလုံလောက်ခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု မလုံလောက်ခြင်း
(င) အကွေ့များတွင် လမ်း မချော်အောင် ဆောင်ရွက်ထားမှု မရှိခြင်း
(၁၀) Auxiliary Facility: Service Area & Tollgate
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ပြင်ပ ပံ့ပိုးမှု အခြင်းအရာများ အနေဖြင့် ယာဉ် ရပ်နား စခန်းများ နှင့် လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့် ဂိတ် (တိုးလ်ဂိတ်) များ တည်ဆောက်ထားမှုအပေါ် တွေ့ရှိချက် များမှာ -
(က) ခရီးသွားများပြားသည့် အချိန်တွင် ယာဉ် ရပ်နားရန်နေရာ အခက်အခဲရှိခြင်း နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
(ခ) စားသောက်ဆိုင်နှင့် ယာဉ် ရပ်နားရာနေရာအကြား သတ်မှတ် လူကူးမျဉ်းကြား မရှိခြင်း
(ဂ) လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံသည့် ဂိတ် နှင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း နီးကပ်မှုကြောင့် ယာဉ်မောင်းသူများအကြား ဝိရောဓိ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
(၁၁) Sign/ Marking, Illumination and Etc.: Road Sign, Safety Sign, and Marking
လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်၊ အမှတ်အသားများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိချက် များမှာ -
(က) လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ မလုံလောက်ခြင်း၊ မရှိခြင်း
(ခ) နေရာ ဒေသ ပြသမှု၊ လမ်း သတိပေး အမှတ်အသားများ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးခြင်း
(ဂ) လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လိုင်းများ၊ လမ်းကြောင်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း
(၁၂) Sign/ Marking, Illumination and Etc.: Illumination
အမြန်လမ်းမကြီးတွင် မီးအလင်းရောင် နှင့် ပတ်သက်ပြီး တွေ့ရှိချက် များမှာ -
(က) မီးအလင်းရောင် မလုံလောက်သဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ မမြင်ရခြင်း
(ခ) ဆန့်ကျင်ဘက် ယာဉ်ကြော မှ ယာဉ်၏ မီးကြီး အလင်းရောင်ကြောင့် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ခြင်း
(ဂ) နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး မီးတိုင်များ ရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်စွာ မလင်း တော့ခြင်းနှင့် နည်းပါးခြင်း
(၁၃) Sign/ Marking, Illumination and Etc.: Etc.
အမြန်လမ်းမကြီး နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြား တွေ့ရှိချက် များမှာ -
(က) မိုး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းချိန်တွင် လမ်းမပေါ် ရေတင်ခြင်းများ
(ခ) မိုးရာသီတွင် နေပွင့်စ အချိန်၌ မြူ များ ပိတ်ခြင်း
(ဂ) တိရိစ္ဆာန်များ လွှတ်ကြောင်းခြင်း
(ဃ) ရောင်ပြန်ပြားများ လုံလောက်စွာ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
(င) လုပ်ငန်းခွင် နေရာများအတွက် လုံလောက်သော သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှိရန် လိုအပ်ခြင်း
(စ) မိုင်တိုင် အမှတ်အသားများမှာ လမ်းနယ်နှင့် နီးကပ်လျှက် ကြီးမား ခိုင်ခန့်စွာ တည်ရှိခြင်း
ယာဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်
RSA Team မှ လေ့လာမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာပါက ရန်ကုန် ဘက်မှ မန္တလေး ဘက်သို့ မောင်းနှင်သည့် ခရီးလမ်းတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အကြိမ် အရေအတွက်မှာ (၂,၆၃၅) ကြိမ် ဖြစ်ပြီး၊ မန္တလေး ဘက်မှ ရန်ကုန် ဘက်သို့ မောင်းနှင်သည့် ခရီးလမ်းတွင် ဖြစ်ပျက်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်မှာ (၂,၃၃၁) ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ ရန်ကုန် မှ မန္တလေး ခရီးစဉ် အတွင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုဟာ မန္တလေး မှ ရန်ကုန် ခရီးစဉ် အတွင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုထက် (၁.၆) ဆ ပိုမို များပြားတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
အချိန်ကာလ အလိုက် မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကို (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြန်လည် စိစစ်တဲ့ အခါမှာ ဧပြီလမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု အများဆုံးနဲ့ စုစုပေါင်း (၁၇.၃%) အထိရှိပြီးတော့၊ ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ တွေမှာ နည်းပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဧပြီလမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပွားတာဟာ ခရီးသွားလာမှု အများဆုံး ဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ အခြား အကြောင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ယခု ဆက်လက်ဖော်ပြမယ် တွက်ချက်မှုများမှာ (၅) နှစ်အတွင်း မန္တလေး မှ ရန်ကုန်သို့ ခရီးစဉ်များအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု အရေအတွက် ဖြစ်သော (၂,၃၃၁) ကြိမ် အပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။) ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်တွေကို လေ့လာရာမှာတော့ ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး အချိန်ဟာ ညနေ (၃) နာရီ မှ (၆) နာရီအတွင်းမှာ အဖြစ်အများဆုံးနဲ့ (၅) နှစ်အတွင်းမှာ အကြိမ်ပေါင်း (၄၀၀) ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့ နံနက်လင်းအားကြီးဖြစ်တဲ့ နံနက် (၆) နာရီ မှ (၉) နာရီ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု (၃၅၃) ကြိမ်မှာ လူဦးရေ (၇၁၂) ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တဲ့ သေကျေ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ ညနေ (၆) နာရီနဲ့ ည (၉) နာရီ အကြားမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု (၂၆၈) ကြိမ်မှာ လူဦးရေ (၁၀၅) ဦး သေကျေ ပျက်စီးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီလို မတော်တဆ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ ယာဉ် (ဥပမာ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လိုမျိုး၊ အမြန်လမ်းကို အသုံးမပြုရလို့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ယာဉ်မျိုး) တွေကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပေါင်းက စုစုပေါင်းရဲ့ (၁၈.၅%) ရှိပြီး၊ အဲလို အဖြစ်အပျက်တွေကနေ လူ သေကျေ ပျက်စီးမှု အနေနဲ့ (၃၁.၀%) အထိ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမို မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားမှုဟာ (၄၅.၉%) နဲ့ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပြီးတော့၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် တရားမဝင် မောင်းနှင်သူတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားမှု နှင့် ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားမှုက ကပ်လိုက် နေပါတယ်။
အမြန်လမ်းမှာ မောင်းနှင်ကြတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပွားရတဲ့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တာယာကွဲတာကြောင့် ဖြစ်ရတာက (၂၁.၄%) နဲ့ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်ပြီးတော့၊ အဲလို တာယာကွဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မတော်တဆမှုတွေကနေ လူ အသေအပြောက် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေပေါင်း (၁၃.၆%) အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၅) နှစ် အတွင်းမှာ လူ သေကျေ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားစေတဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုတွေကို စီစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ အကြိမ် ၁၀၀ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တိုင်း လူ ၄၂.၉ ဦး သေဆုံးရတယ် ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
RSA Team အနေနဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ဖို့၊ ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့၊ နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့အတွက် ကာလတို ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေ၊ ရေရှည် ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို အကြံပြု တင်ပြထားပါတယ်။
ကာလတိုအနေနဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးသို့ အဝင်/အထွက်လမ်းတွေ နဲ့ “ဂ ငယ်ကွေ့” တွေကို သေသေချာချာ စီမံ ခန့်ခွဲ နိုင်ဖို့၊ လမ်း မျက်နှာပြင် အနိမ့် အမြင့် တွေကို ပြန်ပြီး ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ လမ်း အပိုင်းအလိုက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် (ADB) ရဲ့ အစီအမံနဲ့ အမြန်လမ်းမကြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စီမံကိန်းကို စဉ်းစား ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စတာတွေကို အကြံပြုပေးခဲ့ သလို၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကာလရှည် အနေနဲ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေကိုလည်း အကြံပြု တင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအမြန်လမ်းမကြီး ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သွားချင်တဲ့ ခရီးတွေ အရင်တုန်းကထက် ပိုမို မြန်ဆန် ချောမွေ့စွာ အသုံးပြု သွားလာနိုင်တယ်ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ တစ်ဖက်ကလည်း ဒီအမြန်လမ်းမကြီးကို ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း မငြင်းနိုင်ပြန်ပါဘူး။
အဲဒါကြောင့် အခုလို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ RSA Team တို့ အချိန်ယူ လေ့လာ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ၊ မော်တော်ယာဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို လေ့လာပြီး စည်းကမ်း ရှိရှိ၊ ဂရုတစိုက် မောင်းနှင်ကြပြီး ယာဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေကို အများကြီး လျှော့ချ သွားနိုင်စေဖို့ လေ့လာ စုစည်း အကြံပြု တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
မှတ်ချက်။ ။ ယခု တင်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များနှင့် ဓာတ်ပုံများ၏ မူရင်း ပိုင်ရှင်မှာ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန နှင့် RSA Team တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေဖြင့် အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူများ လေ့လာ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ နှင့် သတိပြုနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည် စုစည်း တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်လမ်း အသုံးပြုသူများ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်။